Welcome aka dee Ọmụmụ!
Ị ka na-dee na abụọ mkpịsị aka? Ị ka na-mkpa anya na gị keyboard tupu ọ bụla keystroke?
Touch dee Ọmụmụ ihe bụ free, onye ọrụ-enyi na enyi mmụta website na e mere na-enyere gị aka ịmụta, omume na mma gị na dee ọsọ na ziri ezi.
Ozugbo ị nwere ike na-emetụ ụdị ị ga-adịghị mkpa anya na keyboard ịchọta akwụkwọ ozi na ị chọrọ pịnye na ị ga-enwe ike pịnye na a ọtụtụ ihe ngwa ngwa ọsọ!
Touch dee bụ a usoro dabeere na muscle ebe nchekwa kama n'anya. Nke a na usoro-enye gị ohere iji nweta ọtụtụ elu ọsọ nke data ntinye, karịsịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ transcribe ederede site n'aka ndị ọzọ visual ihe onwunwe.
Dee na aka dee usoro budata mma gị na kọmputa na arụpụtaghị; ọ na-enwekwu data ntinye ọsọ na, ebe o kwere omume, na-ebelata ike ọgwụgwụ na mmerụ ahụ anya.
Touch dee Ọmụmụ nwere 15 ihe, a na-agba ule na egwuregwu site na nke ị pụrụ ịmụta pịnye nzọụkwụ-site-nzọụkwụ, nyochaa na gị onwe gị na-enwe ọganihu ma na-ekpori ndụ!
Hints Malite dee
Keyboard okirikiri nhọrọ ukwuu